Ungawavimbela Kanjani I-IP Camera Hackers
Abantu abaningi bayasaba ukusebenzisa amakhamera we-IP. Hhayi ngoba abazi ukuthi bayisebenzisa kanjani. Yingoba besaba ukuthi abaduni bangase babone ukuthi bayini ...
Abantu abaningi bayasaba ukusebenzisa amakhamera we-IP. Hhayi ngoba abanzi'Ngiyazi ukuthi ulusebenzisa kanjani. Yona'Ngoba besaba ukuthi abaduni bangase babone ukuthi benzani ngamakhamera abo we-IP. Yona'Unengqondo ukukhathazeka ngalokho ngaphandle kokuthi wenza lapho ulandela izinyathelo zokuvimbela abaduni bekhamera ye-IP.
Ngaphambi kokuthi ngikwazise izinyathelo engifuna ukukukhombisa isithombe sokuthi aIkhamera ye-IP Xhuma kwi-Intanethi.
1.Vikela inethiwekhi yakho ye-Intanethi
Uma usebenzisa ikhamera ye-IP esele ixhumene ne-Intanethi. Le Internet isho okwakhoIkhaya WiFi. Into eyodwa ongayenza ukuvikela iphasiwedi ye-WiFi. Kufanele usethe iphasiwedi eqinile okufanele't babe nje izinombolo ezihlanzekile noma izinhlamvu. Kufanele uyihlanganise ndawonye futhi kungcono ukuthi ungeze izimpawu ezithile kwiphasiwedi yakho.
Enye into okufanele uyenze ukushintsha iphasiwedi yakho njalo. Mhlawumbe abanye babangani bakho beza endlini yakho, uzobatshela iphasiwedi yakho yasekhaya ye-WiFi. Qaphela ukuthi bangakwenza konke ngephasiwedi yakho ye-WiFi. Ngakho-ke uyazi ukuthi kubaluleke kangakanani ukushintsha iphasiwedi yakho ye-wifi ngesikhathi esifanele.
2.Iphasiwedi ibuye ivikele amakhamera akho
Uvame ukusebenzisa uhlelo lokusebenza ocingweni ukuzeGada ikhaya lakho. Futhi mhlawumbe amalungu omndeni wakho nawo ane-password yohlelo lokusebenza. Qiniseka ukuthi wonke umuntu onqobile't Vuza iphasiwedi kwabanye abantu. Kodwa'kungcono ukushintsha iphasiwedi.
3.Gwema ukudlulela ethekwini kwikhamera yakho ye-IP
I-router oyisebenzisa iza nayo eyakhelwe ezokuphepha evimba izinhlelo ezithile zokufinyelela kunethiwekhi yakho yasekhaya. Abanye abantu bakhetha ukusetha ukudluliselwa ethekwini kumadivayisi afana ne-Xbox okungenzeka ukuthi kulungile, kepha uma kukhulunywa ngamakhamera we-IP't Kuncoma ukuthi wenze lokhu.
4.Shintsha iphasiwedi ye-router yakho
Akusona isidingo sokuthi ngivuselele ukubaluleka kwephasiwedi.
5.Vuselela ikhamera yakho'isimpumuzo
Ngaso sonke isikhathi uma uvuselela ikhamera yakho'I-firmware, abaduni baya kude. Uhlelo luzobe luphephile ngemuva kokuvuselela ikhamera yakho'i-firmware.
+.Gwema ukudlulela ethekwini kwikhamera yakho ye-IP
Okuthengwa eshumi no-5.Vuselela ikhamera yakho'isimpumuzo
PHAMBI Ungawabeka kuphi amakhamera we-IP ezokuphepha?
Ngizothatha imboni yezokuphepha njengomsebenzi wami OLANDELAYO